လမျး . . . – Shinyoon
လမျး . . .
လမျး . . .ဘ၀မှာ ဆကျပွီး လြှောကျရမယျ့လမျးတှမေရောကျခငျ ဒှိဟဖွဈစရာ လမျးတှနေဲ့ အရငျ ကွုံရတတျတယျ
ရှေးခယျြပွီးသှားရငျ ဘယျလောကျပဲ ဒဏျရာမြားမြား ဆကျပွီး လြှောကျရမှာတှကွေီးပဲလေ ကိုယျ ရှေးခယျြပွီးသှားပွီမလား ဆကျပွီးပဲ လြှောကျရုံပေါ့
တခြို့လမျးတှကေ ဘယျလောကျမှားတယျလို့ပဲ ဆငျခွငျမိဆငျခွငျမိ နောကျပွနျလှညျ့ခှငျ့မရှိတော့ဘူး ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှနေဲ့ ဆကျပွီးလြှောကျရတာမြားတယျ ဒါကွောငျ့ လမျးတှလြှေောကျရငျ ရှေးခယျြစရာတှေ ရှိလာတဲ့အခါ နှလုံးသားတဈခုတညျးနဲ့ ဆုံးဖွတျဖို့ မလုံလောကျဘူး ဦးဏှောကျလေးနဲ့ပါ တှေးချေါသုံးသပျဖို့လိုတယျလေ
ငါ့လှေ ငါထိုး ပဲခူးရောကျရောကျ ငါ့မွငျးငါစိုငျး စဈကိုငျး​ရောကျရောကျဆိုသလိုမြိုး ကိုယျရှေးတဲ့လမျး ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျလြှောကျမယျ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဂရုမစိုကျနဲ့ဆိုပွီး လုပျလို့မရဘူးမဟုတျဘူး လုပျလို့ရပါတယျ
ဒါပမေယျ့ ကိုယျဖွဈရငျ ကိုယျပဲ ခံရတာ လောကမှာ ရစေကျပါလို့ပဲဆုံဆုံ ၀ဋျကွှေးပါလို့ပဲဆုံဆုံ တဈနကေ့ရြငျ ခှဲခှါရမယျဆိုတဲ့ ဓမ်မတာကိုတော့ ရှောငျလှဲလို့မရဘူး ကိုယျတဈယောကျတညျး ကနျြခငျြကနျြခဲ့လိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ ကနျြခဲ့ရုံ ခနျြခဲ့ရုံနဲ့ ရပျတနျ့လိုကျလို့မရဘူးလေ
ကိုယျ့လမျးကိုယျ ဆကျပွီးလြှောကျနရေမှာလေ ဘ၀မဆုံးမခငျြး ကံမကုနျခငျြး ကိုယျရှေးထားတဲ့လမျးကို ကိုယျကိုယျတိုငျ ဆကျပွီးလြှောကျနရေမှာပဲလေ ဒါကွောငျ့ လမျးတှေ ရှေးဖို့ဖွဈလာတဲ့အခါ အရှေးမမှားစနေဲ့ ခဏတဖွုတျလေး ကွညျ့ပွီး လှယျလှယျလေး မဆုံးဖွတျပဈလိုကျနဲ့
အရာအားလုံးကို သခြောသုံးသပျပွီးသှားတော့မှ ဆိုးတာတှကွေီးပဲ ဖွဈလာရငျတောငျ ခံနိုငျရညျရှိတယျဆိုကာမှ ရှေးခယျြစခေငျြတယျ နောငျတတှနေဲ့ နာကငျြစရာတှနေဲ့ ဆကျပွီးလြှောကျရတဲ့လမျးတှကေ ဘယျလောကျအထိ ပငျပနျးရလဲဆိုတာ မခံစားစခေငျြဘူးလေ ။
ပွီး​တော့ ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျနတောပဲ ဘယျသူ့ ဂရုစိုကျစရာလိုလဲဆိုတာ တကယျတော့မှားတယျ ကိုယျ့လမျးကိုယျ လြှောကျနတောမှနျပမေယျ့ လမျးခုလတျမှာ ခွထေိုးခံမယျ့လူတှေ ရှိတယျ ခလုတျလာတိုကျမယျ့လူတှေ ရှိတယျ အဲ့ဒီအခိုကျအတနျ့တှမှော ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျနတောမှနျပမေယျ့ ဂရုစိုကျရမယျလေ
အနောကျကနေ ဘေးကနေ သိသိသာသာပဲဖွဈဖွဈ မသိမသာပဲဖွဈဖွဈ တိုကျခိုကျမယျ့လူတှကေ အမြားကွီးစောငျ့နတေဲ့ ဘ၀မှာ ဂရုတစိုကျနဲ့ ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျပါ ။
လမ်း . . .ဘ၀မှာ ဆက်ပြီး လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေမရောက်ခင် ဒွိဟဖြစ်စရာ လမ်းတွေနဲ့ အရင် ကြုံရတတ်တယ်
ရွေးချယ်ပြီးသွားရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဒဏ်ရာများများ ဆက်ပြီး လျှောက်ရမှာတွေကြီးပဲလေ ကိုယ် ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီမလား ဆက်ပြီးပဲ လျှောက်ရုံပေါ့
တချို့လမ်းတွေက ဘယ်လောက်မှားတယ်လို့ပဲ ဆင်ခြင်မိဆင်ခြင်မိ နောက်ပြန်လှည့်ခွင့်မရှိတော့ဘူး ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ဆက်ပြီးလျှောက်ရတာများတယ် ဒါကြောင့် လမ်းတွေလျှောက်ရင် ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိလာတဲ့အခါ နှလုံးသားတစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ မလုံလောက်ဘူး ဦးဏှောက်လေးနဲ့ပါ တွေးခေါ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လေ
ငါ့လှေ ငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်း​ရောက်ရောက်ဆိုသလိုမျိုး ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်း ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လျှောက်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်နဲ့ဆိုပြီး လုပ်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူး လုပ်လို့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ပဲ ခံရတာ လောကမှာ ရေစက်ပါလို့ပဲဆုံဆုံ ၀ဋ်ကြွေးပါလို့ပဲဆုံဆုံ တစ်နေ့ကျရင် ခွဲခွါရမယ်ဆိုတဲ့ ဓမ္မတာကိုတော့ ရှောင်လွဲလို့မရဘူး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ချင်ကျန်ခဲ့လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကျန်ခဲ့ရုံ ချန်ခဲ့ရုံနဲ့ ရပ်တန့်လိုက်လို့မရဘူးလေ
ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်ပြီးလျှောက်နေရမှာလေ ဘ၀မဆုံးမချင်း ကံမကုန်ချင်း ကိုယ်ရွေးထားတဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆက်ပြီးလျှောက်နေရမှာပဲလေ ဒါကြောင့် လမ်းတွေ ရွေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ အရွေးမမှားစေနဲ့ ခဏတဖြုတ်လေး ကြည့်ပြီး လွယ်လွယ်လေး မဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်နဲ့
အရာအားလုံးကို သေချာသုံးသပ်ပြီးသွားတော့မှ ဆိုးတာတွေကြီးပဲ ဖြစ်လာရင်တောင် ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုကာမှ ရွေးချယ်စေချင်တယ် နောင်တတွေနဲ့ နာကျင်စရာတွေနဲ့ ဆက်ပြီးလျှောက်ရတဲ့လမ်းတွေက ဘယ်လောက်အထိ ပင်ပန်းရလဲဆိုတာ မခံစားစေချင်ဘူးလေ ။
ပြီး​တော့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နေတာပဲ ဘယ်သူ့ ဂရုစိုက်စရာလိုလဲဆိုတာ တကယ်တော့မှားတယ် ကိုယ့်လမ်းကိုယ် လျှောက်နေတာမှန်ပေမယ့် လမ်းခုလတ်မှာ ခြေထိုးခံမယ့်လူတွေ ရှိတယ် ခလုတ်လာတိုက်မယ့်လူတွေ ရှိတယ် အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နေတာမှန်ပေမယ့် ဂရုစိုက်ရမယ်လေ
အနောက်ကနေ ဘေးကနေ သိသိသာသာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်မယ့်လူတွေက အများကြီးစောင့်နေတဲ့ ဘ၀မှာ ဂရုတစိုက်နဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပါ ။
ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ကိုယျခငျြးစာပါ ဒါမှမဟုတျ စာနာပေးပါ